6th ODI: SL vs Zim | Photo Gallery
6th ODI: SL vs Zim
June 07, 2010 23:38
Zimbabwean batsman Brendan Taylor and Tatenda Taibu is being congratulated by Sri Lankan players after winning in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. Taylor was 119 runs not out leading Zimbabwe to win by 8 wickets. (AFP Photo)
Zimbabwe batsman Brendan Taylor celebrates after his century against Sri Lanka in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AFP Photo)
Sri Lankan captain Tillakaratne Dilshan celebrates with wicketkeeper Dinesh Chandimal the wicket of Zimbabwean batsman Chamunorwa Chibhabha in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AFP Photo)
Sri Lankan batsman Magina Thilan Mirando ducks the ball from Zimbabwean bowler Christopher Mpofu in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AFP Photo)
Zimbabwean bowler Christopher Mpofu celebrates with his teammate wicketkeeper Tatenda Taibu, after taking the wicket of Sri Lankan batsman Thissara Perera in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AFP Photo)
Sri Lankan batsman Jeevan Mendis takes a shot with Zimbabwean wicketkeeper Tatenda Taibu behind him in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AFP Photo)
Sri Lankan batsman Upul Tharanga plays a shot while Zimbabwean wicketkeeper Tatenda Taibu jumps during the match against Zimbabwe in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AP Photo)
Sri Lankan batsman Dinesh Chandimul walks off the pitch as Zimbabwean players celebrate his wicket during the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AP Photo)
Sri Lankan batsman Tillakaratne Dilshan plays a shot while Zimbabwean wicketkeeper Tatenda Taibu looks on, in the sixth ODI of the Micromax Cup in Harare. (AP Photo)